module ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > module ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
module ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသုံးချ တွင် ထိန်းချုပ်မှုlတွင်g အမျိုးမျိုးသော အဆို့ရှင် နှင့် အခြား တူသော ထုတ်ကုန်, တွင်clude လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, ဂိတ် အဆို့ရှင်, ထိန်းချုပ်မှု အခင်အရှင် နှင့် etc.With ထ သို့ 51 termတွင်als, ဖွ တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်ခွင့် မပါဘဲ အဆိုပါ အထူး wirတွင်g ကြေးနီ rတွင်gs. အဆင်ပြေ နှင့် ပိုလွယ်လိုက်တာ သို့r ထိုနေရာမှာပဲ တွင်stallation.AOX-M စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r တွေ့ဆုံ တွင်ternational stနှင့်ards နှင့် ဖြစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက် ၏ မြင့်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှု အသက် - tryတွင်g သို့ mတွင်imize maတွင်tenance လိုအပ်ချက်များ။ AOX အကောင်အထည်ဖေါ် အာမခံချက် လုံခွုံသော နှင့် စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုs အောက် အမျိုးမျိုးသော အစွန်းရောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွအေန။
ဆူညံသံအဆင့်: 1 မီတာအတွင်းတွင်ထက်နည်း 75 dB
ချေးအဆငျ့: Epoxy အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း NEMA 4x ချေးကာကွယ်မှု optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထားအဆငျ့: Exd IIC T5 ဒီဇိုင်း
မော်တော်သတ်မှတ်ချက်: အတန်းအစားက F, 135Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှအပူကာကွယ်တက်နှင့်အတူ
လျှပ်စစ် interface ကို:2* NPT 3/4, 1 * NPT1 1/2
Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: IP67, Optional: IP68
မော်တော် overheat ကာကွယ်မှု
သုံးအဆင့်ပါဝါအဆင့် sequence ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
စက်မှု interlock ကာကွယ်မှု
1. ကိုနှစ်ချက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ terminal ကို box ကိုပိတျထားသော
AOX-M စီးရီး terminal သေတ္တာပေါင်းစုံနှစ်ချက်တံဆိပ်ခတ်သီးခြားဝင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်သည့်လျှပ်စစ် actuator, turn on-site ကိုဝါယာကြိုးလုပ်ဖွင့်သေတ္တာအဖုံးလျှင်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသမာဓိရှိအာမခံပြောင်းလဲပစ်။
output ကို torque ၏ 2. Wide အကွာအဝေး။
တိုက်ရိုက် torque လက်ငင်းတစ်ပိုးဂီယာအုံနဲ့ပေါင်းစပ် 1000Nm.When 40 nm ကနေအထိ, အများဆုံး torque output ကို 50,000Nm မှတက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
3. Diferent ထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်စရာသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း။
ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn ပြောင်းလဲပစ် AOX-M စီးရီးတွင် / ပယ်ရိုးရှင်းပြီးအသိဉာဏ် Module ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် fieldbus interface ကိုထံမှအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
rated currentï¼Aï¼ 50HZ
ဝင်း: IP67ï¼ IP68 optionalï¼, NEMA4 နဲ့ 6
Standardï¼ 380V AC / 3ph
110 / 220V AC / 1ph, 440V AC / 3ph, 50 / 60Hz Optionalï¼, A 10% ±
1A ပွင့်လင်း / ပိတ်, SPDT, 250V AC အ10Aï¼ / ချွတ်modelï¼အပေါ်
1A ပွင့်လင်း / ပိတ်, SPDT, 250V AC အ 10A
တစ်ဦး±5â / Close ကို internal-ထားရှိအပူprotectionï¼ပွင့်လင်း120â97âတစ်±5â
handwheel စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူယန္တရား Declutching
နှစ်ချက်တံဆိပျကို 3A ï¼ PT3 / 4A တစ် PT1-1 / 2A တစ်PT1âoptionalï¼
00 actuators အထူးရေနံ
ကျဇယားသံ, High-အစှမျးသတ်တိလူမီနီယံသတ္တုစပ်, သံမဏိ, လူမီနီယံကြေးဝါ, polycarbonate
torque အထွတ်အထိပ် Overload ကာကွယ်မှု
display screen ကို
LED Display ကို (စမတ်စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား)
ချိန်ညှိခြင်း mode ကို
(ထိုအဖုံး set ကို type ကိုမဖွင့်စရာမလိုဘဲ) non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို
non-ထိုးဖောက် rotary switch ကိုအတူပေါင်းစည်းထိန်းချုပ်မှုယူနစ်
option ကို cheme
ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား actuator (¡ CT4 â Exd)
မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ actuator (-10â ~ + 100â)
အထူးအထွက် drive ကို
ကျနော်တို့ပါဝါစက်ရုံနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, Shipbuilding HVAC, Waterworks, ကမ်းလွန်, Pull & စက္ကူ, ဓာတု, ရေနံဓာတုဗေဒ, ရေနံချက်စက်ရုံ, စွမ်းအင်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သတ္တုတွင်း, ဆေးဝါး, စားနပ်ရိက္ခာ & Beverage တစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ မာလ်တီအလှည့်လျှပ်စစ် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-M စီးရီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်မှအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ အမိန့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်း, လုံခြုံခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း team.It တည်ထောင်ရန်အတွက်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn ပြောင်းလဲပစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-M စီးရီး၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
မာလ်တီအလှည့်လျှပ်စစ် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-M စီးရီးအကြောင်းကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
ဖြေ Pls ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ငါနှင့်အတူအ chat ။
QQ: 2864920739, E-mail: [email protected]
Skype ကို: ပတေရုသ Zjaox
Q: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကို suiting အဆိုပါဝင်းဒီဇိုင်းများကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသလား?
မေး: နိုင်ငံများတွင်သင့်ရဲ့ AOX-M စီးရီးရောင်းချပေါင်းစုံအလှည့်လျှပ်စစ် actuator ပြောင်းလဲပစ်ထားတဲ့?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဥရောပ, အမေရိကန်, အရှေ့တောင်အာရှ, ရုရှားနှင့်အာဖရိကမှတင်ပို့နှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျ 30 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများကျော်ပြန့်နှံ့နေကြတယ်
hot Tags:: module ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
ဉာဏ်ကောင်းသော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
module စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
စမတ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
ကျစ်လစ်သော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator